China Fluorobenzene fanamboarana sy orinasa | olona afaka
CAS tsia: 462-06-6
Fisehoana: Rano madio tsy misy loko
Fahadiovana (GC): 99,9% min
Phenol: 0,05% max
2,2-difluorobiphenyl: 0,02% max
200kg / amponga, 16Mt / FCL, tanky 22mt / ISO
UN No.2387, Kilasy: 3, Antoko famonosana: II
☑ Nampiasaina tamin'ny indostria, fanafody, elektronika;
☑ Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny fanomanana ny akora fototra amin'ny fanafody antipsychotic, toy ny fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, sns. Mandritra izany fotoana izany, dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny famantarana ny fanafody famonoana bibikely, mpamono atody, plastika ary polymer resin. Ny fatran'ny fluorobenzene miaraka amin'ny γ - chlorobutyryl chloride dia afaka mamokatra γ - chloro-p-fluorophenone, izay ampiasaina hanamboarana haloperidol ary no fanafody be mpampiasa indrindra amin'ny antipsychotics butyrylbenzene.
☑ Amin'ny indostrian'ny elektronika dia ampiasaina amin'ny batery misy fonosana manokana izy io, voafehy tsara ny hamandoana; ny flluorobenzene dia tsy vitan'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny Li + sy ny DME, fa koa ny fanakanana ny famotehana ny DME amin'ny lafiny iray; Ankoatr'izay, ny fluorobenzene dia azo ahena eo ambonin'ny ambonin'ny anode lithium mba hamorona LIF, izay afaka mahazo sosona fiarovan'ny fifandraisana matevina haingana. Miorina amin'io toetra mampiavaka azy io, ny electrolyte mifangaro avo lenta amin'ny fluorobenzene dia tsy afaka manatsara ny fitoniana sy ny fahombiazan'ny coulomb anode lithium anode (ny fahombiazan'ny coulomb eo ho eo dia 99,3% raha ny tsingerin'ny fahamarinan-toerana dia mihoatra ny 500 tsingerina), fa azo ampiasaina ihany koa amin'ny andiam-pitsapana fitiliana batterie feno azo ampiharina (ao anatin'izany ny fahaiza-manao ambony, ny tontolo iva ambany, ny haavon'ny haavony ankehitriny, ny fahombiazan'ny bisikileta tena tsara dia azo tamin'ny alàlan'ny votoatin'ny electrolyte ambany sy ny anôtrika lithium manify;
☑ Ny fluorobenzene fahadiovana avo lenta dia nampiasaina tamim-pahombiazana tamin'ny electrolyte an'ny bateria lithium-ion. Raha ampitahaina amin'ny electrolyte mahazatra misy karbonat dia azo hatsaraina ny fahombiazan'ny bateria lithium-ion amin'ny alàlan'ny fampidirana fluorobenzene be dia be, izay misy tombony miharihary amin'ny fahombiazan'ny maripana ambany, ny fiainana bateria ary ny fahafahan'ny hafanana avo. Fluorobenzene dia mety hitondra rano amin'ny dingan'ny famokarana, fitaterana ary fitehirizana. Raha avo loatra ny rano ao anatiny dia hisy fiatraikany amin'ny atin'ny rano amin'ny elektrolitan'ny bateria lithium-ion. Ny atin'ny rano avo loatra dia misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny electrochemical an'ny bateria. Amin'ny ankapobeny, voafehy tsara ny atin'ny rano ao amin'ny electrolyte;
☑ Vokatra nankatoavin'ny orinasa mpamokatra fanafody;
☑ Nankatoavin'ny mpanjifa Japoney hampiasa elektronika ny vokatra. Manana ny teknolojia hialana amin'ny hamandoana isika amin'ny resaka famokarana, fonosana ary fitaterana, hiantohana ny kalitao;
☑ Fandefasana ara-potoana: herinandro 1 avy ao amin'ny trano fanatobiana entana any Shanghai;
☑ akaikin'ny loharano HF ny zavamaniry, amin'izay hampihenana ny vidiny sy hiantohana ny fitohizan'ny famokarana;
Teo aloha: Asidra Crotonic